Installing Zawgyi Font and Trouble Shooting (Video) | U.N.O.B
ဇော်ဂျီဗမာစာလုံးမရှိသည့်အတွက် Web Site များပေါ်မှာ ဗမာစာဖတ်ရန် အခက်အခဲရှိနေသူများ ဤ Video ကြည့်၍ ဖြေရှင်းနိုင်ပါမည်။ Windows System များ အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အခက်အခဲ ကြုံသည့် အခါမျိုးများတွင်လည်း ဤ Web Site Link ကိုပေး၍ ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ (Font Download)
Direct Link : http://unobusa.org/uploads/how_to_zawgyi_high.wmv
Click here to go to Zawgyi Font Download page
zin October 20, 2015 at 5:18 am Reply
ဇော်ဂျီဖောင့် စာလုံးပေါင်းတွေ website မှာနေရာလွဲနေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပေးပါလား
khinelinning February 28, 2013 at 10:23 pm Reply
အကိုရေ ကျနော်မှာ fa မှာယော galk မှာပါ..စာတွေပြောင်းပြန်တွေ စာနှစ်ထက်သုံးထက်တွေ ပေါ်နေပါတယ် အကိုအားရင် စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အင်တာနက်ကိုသွားလို့ရအောင် ဒေါင်းလုပ်ထားပေးပါလား ကျနော် နောက်တစ်နေ့ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်..ကိုကြီးကူညီပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ကျနော် နာမည် ခိုင်လင်းနိုင်ပါ..
Administrator February 28, 2013 at 11:57 pm Reply
internet Explorer’s Menu (at the top)
(3) Gtalk Setting> Appearance> Font > Zawgyi-one
win February 16, 2013 at 4:52 pm Reply
William November 3, 2011 at 10:28 am Reply
tank you so much!!!!!….. very good video